Transposh - Kukurira mutauro zvipingamupinyi - The transposh.org Wordpress Plugin showcase nerutsigiro paIndaneti
Goredzva rakanaka 2015 – Chii zvakamirira?
Ndira 1, 2015 kubudikidza chipo 3 Comments
Just aida kuita kukurumidza writeup pamusoro ndezvipi zviri chakarongwa nokuda kwegore kuuya:
Backend tambo mupepeti – aya anenge 80% zvakakwana ikozvino, zvinoita here kuona Tambo akaiswa kuna Database uye kuita zvimwe zvinhu avo. Zvinhu zvino zvakaoma zvakadai achibvisa shanduro zvose kubva chete mushanduri achava Snap. Nyaya iyi iri kutarisirwa kuti asunungurwe mashoma mavhiki.
Rutsigiro Widgets mune Uploads dhairetori – tsika Widget vanyori Zvave vachinyunyuta (unomirirei) nezvokuti upgrading anoudza reinstall pakati Widgets. Pfungwa iyi achava kubvumira vamwe mafaira kugara ikoko uye kudzivisa kuti dzichikunetsa. Izvi zvingashandiswawo kuvhura pfungwa imwe Downloadable Widget Directory izvo ichatitendera kupa zvakawanda kusarudza Widgets pasina achiwedzeredza plugin faira saizi.
Frontend tambo mupepeti – ichi achasika vamwe inowanikwa kuna parukungiso papeji, kuti apo vasiri “wysiwyg” zvichaita kuti vamwe Workflow nani, ainyanya chete maererano kuti Editing Meta tambo nezvimwe hungiso yakavanzwa, vamwe rombo, ajax shanduro kuchavawo editable pashure ndiwedzere ichi. Uyu achatora mishomanana kuuya.
Nhamba hurongwa rutsigiro – ichi chinhu vachangoerekana kushandura nhamba kubva European nhamba mamiriro ezvinhu Arabic uye Hindi nehurongwa (uye zvichida mutevedzeri-angadaro). Kwete akaoma rutivi asi akanaka chinhu nokukurumidza kuuya kuti parser pedyo newe.
WP Menu kusangana – kwete chaizvo kuda kuita chaizvoizvo ichi, chingaitika, irege.
Chero mhinduro pfungwa vachagamuchirwa pazasi, kana ivo nomusoro tichasvika kuwedzera kuti workplan yedu. Kana uchinyatsoda kuda kusimudzira chinhu unogona dzinotsigira ari Coding, kutirovera runhare nomukombiyuta chimiro.
mhando 0.9.6.0 – chakarebesa nonoka, akasunungura musi kupfupika zuva
Zvita 21, 2014 kubudikidza chipo Leave a Comment
Shanduro iyi rinowedzera itsva mitauro gumi Google kushandura achangobva akawedzera. Kusunungurwa pfungwa kundorwisa nyevero notupukanana kuti vakapinda Transposh mugore rapera.
Mumwe anogona kuzvibvunza, kana software hachina kuchinja, sei anouya notupukanana kunge akanyahwaira mu? Mhinduro iri nyore, usashandisa hakuwaniki ari Vacuum, Zvinhu zvinochinja dzose nguva, Shanduro itsva PHP akawedzera yakasimba nyevero izvo zvakashatirisa vamwe vanoshandisa, paiva zvabudiswa itsva Wordpress nezvimwewo-software chikamu, uyewo kushandurwa kuti Google wemasimbaose kududzira injini. kuchinja avo akasika ezvinhu kuti bumbiro ano akasagona kubata, asi tinoda shanduro itsva iyi ichava zvishoma vanogona kuita.
Other zvinhu zvitsva inosanganisira Yoast SEO sitemaps kusangana (Unofanira achichisonera panguo nayo, nemirayiridzo mubumbiro redu).
A duku chinhu kubvisa maturo shanduro repair (apo Translations akanga akaenzana parukungiso yepakutanga, izvo zvinoitika kana dzimwe nzvimbo vakapindira nemutemo Google)
zvimwe zvinhu, ari readme.txt faira ndiyo shamwari yako.
Vachitarisira kuwana zvinhu zvakawanda kusvika nokukurumidza uye tikaisa 🙂
mhando 0.9.5 – The rakarasika ndiwedzere
Kukadzi 11, 2014 kubudikidza chipo 8 Comments
mhando 0.9.5 akasunungurwa kwete zvakare kare, uye rizere Version 0.9.5.1 akasunungurwa zvakanaka. Unogona kuzvibvunza, Ndiri kutsvaka reserved mu Wordpress rangu dashboard uye handioni chinhu, sei anouya?
Ichi ndicho chikonzero chaiwo 0.9.5 vakauya upenyu, paiva dzinonetsa tsikidzi chokuita nokuchinja kwakaitwa ndiwedzere API kubudikidza Wordpress 3.8 zvaakatadzisa transposh kuvhara reserved zvose (kusanganisira yayo) kubva dashboard.
Kuti ndiwedzere ichangobva zvizere Version, pane zvishoma mikana:
chokukuvadza kuitika Transposh plugin, tarisa kuti reserved, update kuti shanduro 0.9.5 kubva wordpress.org, Activate ari plugin, maka “kubvumira update zvizere shanduro” uye kunatsurudza zvakare
zvinomuomera kuikanganwa vamuri shanduro plugin uye dzishandise shanduro kubva wordpress.org uye kutevera update nzira
manually kukopa ichangobva shanduro uye chete akatsiva mafaira pamusoro Server yako.
Tine urombo zvechokwadi pamusoro kuzvuzvungudza ichi
Chii chimwe chitsva?
mitauro More ndokuwedzerwa kuna Google injini, kuchinja uwandu kuna 82 akatsigira mitauro!
Raiva akanaka shanduro, pazvinhu nenyaya pamwe Google Marshal rutsigiro, tinofanira kunge zvakanyorwa zvizere mumhanyi nezvazvo zvakare, saka 0.9.4, ndapota gamuchirai ruregero yedu 😉
Nakidzwa shanduro itsva, uye usazeza Anotiudza pamusoro chero nyaya